'मैले धेरै पटक आफुलाई छामीरहेँ, बाँचेको विश्वास नै भएन' - Himalayamail.com
– थानेश्वर सापकोटा
त्यो माओबादी जनयुद्दको दोस्रो बर्ष थियो सायद । रोल्पा रुकुमतिर पुलिस चौकी सँगै कांग्रेस कार्यकर्ता माओवादी निसानामा पर्दै थिए । एमाले एक हिसाबले खुशी नै थियो ! उसलाई लाग्थ्यो नेपाली कांग्रेस नसकिए सम्म वा देशको सबै भन्दा पुरानो पार्टी शिथिल नभए सम्म आफुहरुको सत्ता यात्रा त्यती सहज हुने छैन । गाउँमा एमाले रित्तिदै थियो, माओवादीमा प्रवेश गर्ने कार्यकर्ताहरुको लर्को थियो । त्यसैले प्रतिस्पर्धी पार्टी कमजोर बनाउन उ चुप्प बसे मात्रै पुग्थ्यो, कांग्रेस सकिन लागे मात्र बल्ल बराबरीमा पुग्थ्यो एमाले । कांग्रेसमा पनि त्यस्तो रौनक थिएन। छत्तिसे र चौहत्तरेको प्रभाव टोलटोलमा थियो, पजेरो काण्डले पुराना कांग्रेसहरुको मथिंगल हल्लाएको थियो । माओवादी त के कुनै पनि प्रकारका बिपक्षीहरु सँग लड्न सक्ने अवस्थामा कांग्रेस कार्यकर्ता थिएनन । पहाडी जिल्लाबाट या त कांग्रेस कार्यकर्ता बिस्थापित भएका थिए या पार्टी त्यागेको सहिछाप गरेर अनाम बसेका थिए । त्यही बेला गिरिजा प्रशाद कोइरालाले शुरु गरे संगठन सुदृढिकरण अभियान । जसमा केन्द्रिय तह सम्म पुगेका नेताहरुको टोली बनाएर जिल्ला जिल्लामा पठाएइएको थियो । हाम्रा तिलक दाईको संयोजकत्वमा रोल्पाका लेखनाथआचार्य प्युठानका लागि खटिए । लेखनाथ आचार्यले पछी रोल्पा बाट चुनाव पनि जित्नु भो प्रतिनिधि सभाका लागि । लेखनाथ आचार्यलाई उतै प्युठान तिर भेट्ने मेसो मिलाएर हामी एकाबिहानै गैंडाकोटबाट पश्चिम हान्नियौं । तिलक दाई, टिकाराम र म ।
अस्ती बेलुका काठमाण्डौंमा- सुशिल कोइराला सँग यो मेरो तेस्रो भेट थियो, उस्तै हिसाबको- बिहानको चार बजे संपर्क कार्यालय महाराजगन्ज । म पुगेको एक्कैछिन पछी मात्र मर्निङवाक बाट बुढा आइपुग्थे, त्यतिबेला सम्म बडेमानको कुकुर डरलाग्दो तरिकाले भुक्थ्यो र फलामे गेट हल्लिने गरी उफ्रिन्थ्यो । सुशिल कोइराला यसैमा आदी थिए, भेटघाट गर्नेहरु पनि समय र वातावरण सँग साटिदै जान्थे । त्यही बिहान थाहा भो तिलक दाइ जाने जिल्लाका बारेमा । “म पनि जान्छु होला”- मैले भने । युवाहरु कांग्रेसमा लागेको देख्दा यिनको मन प्रफुल्ल हुन्छ अरे- बुढा मुसुक्क हाँसे- “अब युवाहरुले नै चलाऊन पर्छ पार्टी” !
हामी भालुवाङमा टिनको छानो भत्केको हाइवे होटलमा भात खाएर उकालीदा घाम ढल्किसकेका थिए । होटलका कुर्सीहरुका पत्र पत्र निस्किएका थिए, टेबुल फोहोर थियो, अल्ली अघी खाना खानेहरुले छरेको जुठो भात सफा भएको थिएन । हामी बसेपछी एउटा इत्रुको केटोले टेबुल सफा गर्दै सोध्यो- “के लिनुहुन्छ ? मासु भात कि सादा” ? अगाडि काउण्टरमा एउटी अधबैंशे महिला थिइन, अली अली मोटी, ठुला ठुला गाजल लगाइएका आँखा र आँखा मुन्तिर पुक्क निस्केका गाला । ति या त जिब्राले थुक लगाएर पैसा गन्थिन या सडकमा हुँइकिने मोटरहरुको गती नियाल्थिन । हामी बसुन्जेल कुनै पनि ग्राहक तिनको होटलमा छिरेन । “माथि बाङ्गेसाल पुगेर चिया खान पर्छ केटा हो”- तिलक दाइले चुरोटको एक कस तानेर ख्वाक ख्वाक खोक्नु भो । “बुढाको आधा फोक्सो चुरोटले थिलो थिलो परेको छ”- टिकारामले भने । हामीले हिसाब गर्दा तिलक दाइले कम्तिमा ८ हजार मिटर लामो चुरोट तानी सक्नुभएछ उफ । “क्यारु छोड्न सकिन”- अघिल्लो सिटबाट तिलकदाइको मसिनो आवाज सुनियो । ढुङ्गे गढी, तिराम र राम्दी छिचोल्दै कारीब चार बजे प्युठान हस्पिटल पुग्दा मुन्तिर पट्टी जस्तापाताले बारेको एउटा चिया पसलामा भेट्टिनु भो प्युठान कांग्रेस सभापति दिवाकर गौतम र लेखनाथ आचार्य । दुबैजना निकै भद्र-सालीन । हामी सबैले फेरी चिया सुर्क्याएर बिजुवार लाग्यौ अली माथि । केही मान्छे सँग भेट्नु थियो शायद- भोलिको कार्यक्रमका लागि । राती सबैजनाको बास दिवाकर गौतमजीको घरमै भयो, दाखाक्वाडी । चिटिक्क परेको दुइतले घर, उँधो पट्टी मसीना खेतका गह्रा, माथि बिस्तारै उकालीदै गएको पहाड र झांगिएका कागतीका बुटा । दिवाकर गौतमजीको हामी बसेको त्यो घरमा पछी माओवादीले आगो लगएछन, अनाज लुटेछन र बारीमा झण्डा गाडेछन । बुढाहरुको रातभरी छलफल भएछ, टिकाराम र म निदायौं । बिहान हामी उठ्दा उहाँहरु उस्तै आसनमा छलफलमै हुनुहुन्थ्यो । “तपाइहरु त सुत्नु भएनछ”- मैले भने । “पार्टीलाई चुस्त बनाउन सके सुत्ने दिन पनि आउलान नि”- दिवाकरजीले फेरी चिया चुस्की लगाउनु भो । बुढाहरु दिनभरी बिजुवारको कार्यक्रममा भए । भात खाने मौकै मिलेन उनिहरुलाई । बिजुवारको कार्यक्रम सकेर हामी उकालीनु पर्ने थियो, सकेसम्म रात नपर्दै बर्जीवाङ पुग्न पाए सुरक्षित हुने अड्कल हुँदो हो सबैको । तर त्यस्तो भएन । साँझ पर्नै लाग्दा बल्ल हामी हिड्यौ । हिंड्ने बेला कसैले भन्यो- “भो आज यतै बस्नुस् । रातिमा अली खतरा हुन्छ” । बुढाहरुले मानेन, संगठनको जुनन थियो । हाम्रो गाडीलाई पुलिस चौकीमा राखेर हामी हिड्यौ ।
ठाडो उकालो छिचोलेर माथि नेटामा पुग्दा साँझको ८ बजिसकेको थियो, धन्न जुनेली रात थियो । तिलक दाइको खुट्टो मर्केर हिंड्नै नमिल्ने भएको थियो तलै, बुढा यहाँँ सम्म कसरी आइपुगे हामी चकीत पर्यै । मैले बोक्छु भने पनि बुढाले मानेनन । रातिको साढे १० बजे होला ढुक्क फुलेको मुटु लिएर हामी बर्जीबाङ पुग्यौ । यो ठाँउमा माओवादी गतिबिधी बढ्दो थियो । खै कुन्नी कसको घरमा हो केही कार्यकर्ता हामीलाई कुरेर बसिरहेका थिए, त्रसित । रातभरी र बिहानको पहिलो प्रहरमा बर्जीवाङको कार्यक्रम सक्नुपर्ने रहेछ उहाँहरु रातभरी छलफल मै बस्नु भो- एक प्रकारको प्रशिक्षण । बिहानको ४ बजे होला हामी सबै एक्कै छिन सुत्यौं । उठ्दा थाहा भो दिनभरी बाटोमा पर्ने केही गाँउहरु र बेलवासमा कार्यकर्ता भेटघाट गरेर राती सम्म भिङ्री झर्ने कार्यक्रम बनेछ । त्यस्तै गर्यौं, टिकाराम र म रोमान्चित नै थियौं तर तिलक दाई, दिवाकरजी र लेखनाथजी भिंग्री झर्दा सम्म लखतरान परे पनि उनिहरुको रातभरी कार्यक्रम चलिरह्यो । हामी सुत्यौं, बुढाहरु सँग जोडकोतोड गर्न सकिएन । भोली दिनभरी पनि उहाँहरुको कार्यक्रम चलिरहह्यो ।
चौथो दिन हामी भिङ्रीबाट प्युठान सदरमुकामका लागि हिड्यौ । टिकाराम र म भन्दा बुढाहरु बढी उत्साहित थिए, जिल्लामा पार्टीका सानातिना समस्या थिए जुन उनिहरुले सुल्झाएका थिए । उनिहरुको पार्टी प्रतीको लगाव कस्तो थियो भने सुत्न नपाए सुत्दैनथे, खान नपाए भोकै बस्थे, चोट लागे खट्न सक्थे उफ्फ । त्यसै दिन मलाई लाग्यो मैले कहिल्यै राजनीति गर्न सक्दिन । हामी सदरमुकामबाट तल ओर्लिदा साँझ परिसकेको थियो । झिम्रुक हेर्ने मेरो चाहना पुरा भएन । झिम्रुक जलबिधुत योजना शुरु भएको थियो भर्खर, मलाई हेर्न मन थियो । तर के भयो भने हाम्रो गाडी सुलुलुल्ल बग्यो । अब बाँचिन्न जस्तो लाग्यो । तिलक दाइले राम राम भनेको सुने, गाडीको उज्यालोमा तलपट्टी बडेमानको खाल्टो देखियो । यो खाल्टोमा खसेपछी हाम्रो शरीरका हजार टुक्रा पर्न सक्छन, बाँच्ने त कुरै छोडौ । हे राम ! खाल्टो भन्दा अलिकती माथि गाडी रोकियो, हामीले लामो सास फेर्यौं- झिम्रुकका माछाले हामीलाई खान पाएनन । त्यो रात हामी दिवाकरजीको घर दाखाक्वाडी मै बास बस्यौं । रातभरी निद्रा परेने, मृत्‍यु र जिन्दगी बिचको इत्रुको डोरो देखेर आएका थियौं हामीले । मैले धेरै पटक आफुलाई छामीरहेँ, बाँचेको विश्वास नै भएन । भोलीपल्ट बिहान हामी तराई झर्यौं, स्‍मृति कतै झर्न सकेन- दाखाक्वाडीबाट तल ओरालो सम्म हामीलाई नियालिरहेका दिवाकर गौतमजीका मलिना आँखा हाम्रा आँखामै बसिरहे- कांग्रेसका आँखाले देख्न सकेन । अहिले दुर दराजबाट हेर्छु दिवाकरजी, लेखनाथजीहरु माओवादीका बन्दुक छलेर बाँचे पनि गुमनाम छन- कांग्रेसले खोजेकै छैन । तिलक दाईका पाखुरामा तरान सकिएको छ- किन चाहियो र निर्बल कार्यकर्ता कांग्रेसलाई । कती होलान देशभरी दिवाकर गौतम, लेखनाथ आचार्य र तिलक सापकोटाहरु ।
(बरिष्ठ पत्रकार सापकोटा ‘गुमनाम परदेशी’का नामले समेत चर्चित हुनुहुन्छ र हाल बेलायतमा बसोबास गर्नुहुन्छ। )